Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Siyaabaha u horseedaya xulashada qasabadda qasabadda jikada ugu fiican
2020 / 11 / 19 QoondayntaTilmaamaha qasabada 7887 0
Doorashada qasabadda jikada waa hawl xiiso leh oo aad ka heli karto fursado badan oo muujinaya qaab, adkeysi iyo muuqaal qurxoon. Dhinaca kale, waa shay khiyaano leh oo aanad dooran karin mid aan kala sooc lahayn oo xoog u tanaasul.
Waa kuwan qaar ka mid ah tilmaamaha kaa caawin doona inaad hesho qasabadda jikada sida ugu fiican ee qasabadda loo yaqaan 'wowow tubuc':
Xulo cabbirka saxda ah iyo dhererka
Intaad dooranaysid qasabadda jikada waxaa muhiim ah inaad tixgeliso cabbirka iyo dhererka si aad uhesho hagaajinta habboon. Cabbirro yaryar oo leh dherer waaweyn waxay siinayaan biyo firidh aan loo baahnayn. Intaa waxaa dheer, waxay kuxirantahay cabirka saxanka aad ku rakibayso qasabada.
Maal gashan badan
Suuqa waxaad ka heli kartaa ikhtiyaarro badan sida matoorka madbakha matte madow iyo inbadan, laakiin haku maal gashan si aad uhesho Xusuusnow in intaad maalgalineyso xoog iyo adkaysi walxaha aad u badan. Waxaa muhiim ah in caqli badan la bixiyo inta la bixinayo lana xulanayo ikhtiyaarrada aan miisaaniyadda ka bixin, oo la buuxinayo baahida loo qabo iyo sidoo kale muuqaal muuqaal leh
Hoos u jiid ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican
Maaddaama qaabab cusub, xulashooyinka hawlgalka laga heli karo suuqa qasabadaha. Waxaad si fudud hoos ugu soo jiidan kartaa iyo xulashada buufiyeyaasha dhinaca. Buufiyaha dhinac laba geesood ah ama hal dhinac ku buufinaya waa qaab duug ah. Halkii laga soo jiidan lahaa waa mid cusub oo soo jiidasho leh waxayna ka caawineysaa in laga fogaado daadashada biyaha. Waxay bixisaa xero aad u waara ka dibna buufis dhinac ah waxayna kaa caawineysaa inaad ka fogaato dhibaatada muddo dheer.
Xulo hal gacan
Dad badan ayaa tixgeliya qasabadaha wajiga laba jibbaaran oo u muuqda kuwo soo jiidasho leh. Waa qasabado qaab dhaqameed soo jireen ah oo soo jireen ah muddo dheer. Laakiin hal qasabad oo wax lagu qabto ayaa aad ugufiican maaraynta waxayna siisaa hagaajinta ugu fiican ee heerka biyaha. Waxaad si fudud ugu qasan kartaa biyaha kulul iyo kuwa qabow hal tuubbo gacanta lagu qaato oo waxaad heli kartaa isku dhaf waxtar badan. Way fududahay in la maareeyo oo loo shaqeeyo marka loo eego tuubbooyinka laba-geesoodka ah.
Tixgeli qaabka xoogga leh
Dadku waxay maalgashadaan qasabadaha iyagoo fiirinaya qaab, muuqaal iyo aragti. Qaabka qasabaddu maahan wax ku saabsan, waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo door ka ciyaara doorashada sida adkeysiga, maaraynta, walxaha iyo qiimaha sidoo kale. markaa, ha ku maal gashan qasabadda jikada adoo fiirinaya kaliya qaabka. Waa inaad fiirisaa godadka biyaha hoostooda, kala doorataa kuwa caadiga ah iyo xulashooyinka hoos u dhaca oo fiiri halka laga gaaro ama dhererka qasabadda sidoo kale.
U fiirso dhammaystir dhammaystiran
Adiga oo raadinaya qasabada ku haboon waa lagama maarmaan in marka hore la eego dhamaadka qasabada. madow matte ayaa jiidaya qasabada jikada si aad u qurux badan oo rafcaan leh qaabka jikada. Intaa waxaa sii dheer, waad qandaraas la geli kartaa midabka iyo qaabka armaajooyinka jikadaada. Waxaa muhiim ah in la doorto dhammaystirka dhammaystiran si looga fogaado dhaawaca iyo wasakhda qasabadda in ka badan. Ama si looga dhigo mid waara oo la isticmaalo muddo dheer.
Hore:: Talaabo Talaabo Talaabo ah oo ku saabsan Dayactirka iyo Sida Loogu Iibsado Qasabadaha qasabadaha khadka tooska ah Next: Talaabooyinka Hagaha oo Dhamaystiran Sida Loogu Rido Giraanta Tuwaalka
2021 / 02 / 03 4890
2021 / 02 / 03 4188
2021 / 01 / 28 3326
2021 / 01 / 28 2183
2021 / 01 / 28 3733